Jabuuti: Safaarada Atobiya oo la Kulantay USN – Rasaasa News
Jabuuti: Safaarada Atobiya oo la Kulantay USN
Jijiga, February 20, 2014 – Dawlada Atoobiya ayaa muujisay dabacsanaan, ka dib kolkii ay in badan diidanayd kulan ay codsadeen mucaaradka Jabuuti Union pour le Salut National (USN). Mucaaradka Jabuuti ayaa codsaday in ay la kulmaan masuuliyiinta arimaha dibada ee Atoobiya bishii November 2013, xiligaas oo shirkii rurka Afrika (AU)uu diiday in uu qaado codsi Union pour le Salut National (USN) gudbistay oo ku saabsanaa wax isdaba marintii doorashadii Jabuuti. Kulanka USN iyo Atobiya, ayaa yimid ka dib kolkii uu Ismaciil Cumar Geele, ku baaqay kulan madaxda mucaaradka Jabuuti, February 1, 2014.
Sida laga soo xigtay mucaaradka Jabuuti (USN), wafti ka kooban afar xubnood oo kala ah; Ahmed Youssouf Houmed (gudoomiye), Daher Ahmed Farah (Afhayeen), Abatte Ebo Adou and Djama Amareh Meidal, ayaa Jabuuti kula kulmay safiirka Atobiya u fadhiya Souleiman Dedefo February 13, 2014. Siada la sheegay wadahadalka oo ay goob joog ka ahaayeen saraakiil ka tirsan safaarada, ayaa laggaga hadlay sidii ay mucaaradka iyo dawlada Jabuuti u wadahadli lahaayeen. Mucaarka ayaa waydiistay Atoobiya in ay u saarto gudi madaxbanaan khilaaka ka dhashay doorashadii Jabuut.
Waftigu waxay aad raali ka noqdeen sida Atobiya ay ula dhacsan tahay xaajadooda. Dhinaca kale, Atobiya aad ayey uga digtoon tahay xaalada siyaasadeed ee Jabuuti oo samayn karta Tareenka iyo Dekada oo jidiin u ah Atobiya. Siyaasiyiinta Atoobiya waxay jecel yihiin in ay milixeeyaan wadahadalka (USN), waliba ay raali galin ka bixiyaab dhacdadii (USN) ka qabsatay shirkii Ururka Afrikan (AU), November 2013.
Si kastaba, Ismaaciil Cumar Geelle ayaan wali furfurin balanqaadkii wadahadal ee uu ogolaaday in uu la yeesho USN. Wali kama uusan jawaabin warqad furan oo ay USN, u qortay February 6, 2014. In kasta oo wasiirka arimaha dibada Mahmoud Ali Youssouf iyo wasiirka maaliyada Ilias Moussa Dawaleh ka horjeedaseen Safiirada EU, wadahadaladii lagga xaajoonayey qodobka 8aad ee heshiiskii Lome.
Los Angeles: Safaarada Atobiya oo Shir u Qabtay Somalida
Militants Attack Presidential Palace in Somalia